Tsalela Us: + 86-311-66575023
HD Medical yasekwa nge-2000, i ishishini elitsha eliphezulu-zobugcisa ngubani iingcali kuphando & nophuhliso, imveliso, ukuthengiswa kunye nenkonzo emva-kwentengiso umfanekiso zonyango iimveliso izixhobo. HD Medical lidlulile ngezatifikethi lwenkqubo yolawulo ISO ngamazwe 9001 kunye ISO 13485 umgangatho, uneendidi 20 bepropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda izatifikethi patent ekunene.
iimveliso zethu zahlulwe DR Medical series yeZilwanyana DR series. I-DR series zonyango ziquka esisiGxina isimbo DR series, Mobile DR series, ray ukhuko caba DR series, eziphathekayo DR series, ezitshintshayo ibhedi caba DR series, ibhasi iimviwo Physical njalo njalo. Animal DR series ziquka isiphelo High Pet DR, Simple kwaye kulula Pet DR, inkonzo update DR, Pet X-reyi izixhobo, ultrasound umbala yeMfuyo, lwezilwanyana MRI, series ukhuko utyando lwezilwanyana kunye neprojekthi nokhuselo njl Kwakhona ukuvelisa zombini iintlobo kwicandelo nobuchwepheshe DR ku DR.
HD Medical umeme ngokunyanisekileyo abasasazi arhente kwihlabathi liphela.
HD Medical yasekwa nge-2000, i ishishini elitsha eliphezulu-zobugcisa ngubani iingcali kuphando & nophuhliso, imveliso, ukuthengiswa kunye nenkonzo emva-kwentengiso umfanekiso zonyango iimveliso izixhobo.